Izibonelelo ezininzi zeoyile yeAlmond yeenwele - Iinwele
Ukucwangciswa Kunye Neengcebiso Ekhaya Iindaba Zefashoni Uthando Lwezesondo #isenzosichasene Nokuxhatshazwa Iinwele Umindiya Diy Izilwanyana Zasekhaya Izixhobo
Zazi izibonelelo ezininzi zeoyile yeAlmond yeenwele
I-almond ngokwenene kukutya okumangalisayo kunye nezibonelelo ezininzi kunempilo, ulusu kunye neenwele. Ii-almonds zinciphisa i-cholesterol, ukunciphisa umngcipheko womhlaza, kunceda ukuthintela isifo sentliziyo, ukulawula iswekile yegazi, kunye nokunceda ukulawula ubunzima. Kwesikhumba naso, sinezibonelelo ezininzi njengokuqaqamba kwesikhumba, ukususwa kwiteni, ukunyanga ukosuleleka kolusu njenge-psoriasis kunye ne-eczema, kwaye sisilungiso semilebe ekrwitshiweyo, imibimbi, izithende eziqhekekileyo, iinyawo ezomileyo nezandla. Kuyanceda ukukhulula izihlunu xa zisetyenziselwa ukuphulula. Nditsho neenwele, izibonelelo zininzi kwaye sijonga indlela ioyile yealmondi ebaluleke ngayo kwizinwele ezisempilweni, ezintle.
I-almond yindawo yamandla yezondlo. Ioyile yeAlmond ityebile kuVitamin E, monounsaturated fatty acids, protein, potassium kunye ne zinc, ngaphandle kwenani lezinye iiminerali kunye neevithamini. Iza ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo - ezikrakra nezithandekayo. Inkqubo ye- ioli yealmond eswiti isetyenziselwa ukujongana nempilo kunye nobuhle njengeoyile yealmondi engenakutyiwa nangona inokusetyenziswa ngokwezihloko. Ii-almonds zivela kummandla waseIndiya, kuMbindi Mpuma, nakwimimandla ekuMantla eAfrika, kwaye ziyinxalenye yamayeza emveli amaninzi iminyaka engenakubalwa.
I-oyile ilula kwaye inevumba elimnandi elenza ukuba yonke into ibe nomtsalane ekusebenziseni, kuba akukho phunga libi okanye ukunamathela okuncangathi okuya kusebenza njengesithintelo ekusebenziseni. Yenye yezona zisetyenziswa kakhulu ioli yeenwele kwizizukulwana ezininzi, eIndiya, ngaphandle kweoyile yekhokhonathi. Ufumana iimveliso ezininzi ezinikezela ngeoyile yealmond. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba le uyisebenzisayo icocekile kwifom kwaye akukho ndlela yakrexeza. Ioyile ye-almond ecinezelwe ngokubanda ngaphandle kwazo naziphi na ezinye izongezo ziya kusebenza kweyona ilungileyo.
1. Ukunyanga iDandruff kunye noMonakalo weenwele
Mbini. Ukujonga usulelo lweNtsundu kunye nokuDumba
3. Ukunyanga ukulahleka kweenwele kunye nokwahlukana kuyaphela
Zine. Ngonwele olucekeceke nolukhazimlayo
5. Kwiinwele ezisempilweni kunye nezinamandla
6. Iindlela ezahlukeneyo zokufaka isicelo
7. Ioyile yeAlmond yeentlobo ezahlukeneyo zeenwele
8. Iimaski zeenwele zisebenzisa ioyile yeAlmond
Ukunyanga iDandruff kunye noMonakalo weenwele
Zininzi izinto ezinokubangela inkwethu. Kungaba ukoma kolusu, ukungacoci kakuhle kwaye rhoqo, ukusetyenziswa kwe-shampooing kakhulu, seborrhoea dermatitis, i-eczema, i-scalp psoriasis, i-allergies, okanye i-fungus efana negwele. Ukwakhiwa kwenyango kuchaphazela iifollic zeenwele njengoko ziqokelelwa entlonzeni kwaye zijikeleze iingcambu zeenwele kwaye ayivumeli ioksijini efunekayo ukuba ifikelele kuyo. Ioyile yeAlmond iyanceda ukuthambisa inkwethu ekhulula ukubamba kwayo entlonzeni kwaye inokucocwa ngokulula xa kusenziwa ishampu emva kokuthambisa.
Unyango: Hlanganisa ioli ye-almond kunye nepunipoon ye-amla powder. Yithambise entlokweni yakho, uyiphulule. Shiya kwizinwele zakho kangangeyure ngaphambi kokuba uyihlambe ngeshampu efanelekileyo yeenwele.
Ukujonga usulelo lweNtsundu kunye nokuDumba
Ungcoliseko, ubushushu, uthuli, kunye neekhemikhali kwiimveliso zeenwele zinokwakhiwa kwiinwele kwaye zichaphazele ngokubangela ukudumba kunye nosulelo. Ukungathathi inkathalo efanelekileyo ukunqanda ezi zinto kukhokelela kwizinwele ezibuthathaka, inkwethu, njl njl.
Unyango: Yongeza icephe eli-1 leoyile ye-oliva eyintombi eyongezelelweyo kwiipunipoyi ezi-2 zeoyile yealmondi Yongeza itispuni e-1 yomthi weti oyile kunye necephe elinobusi obu-1 kumxube. Hlanganisa kakuhle kwaye usebenzise kwi-scalp. Gcina oku kangangesiqingatha seyure, phambi kokuba uyihlambe.
Ukunyanga ukulahleka kweenwele kunye nokwahlukana kuyaphela
Ukudumba kwe-Scalp kunye ne-dandruff yokwakha kungakhokelela ekulahlekelweni ziinwele. Uninzi lwezinye izinto ezinje ngokusilela kwezondlo ezifanelekileyo, ukoma kweenwele, njl. Njl. Ukukhokelela ekwandeni kokulahleka kweenwele, njengoko kunjalo ukwahlukana . Into efunwa ziinwele zakho kukunyusa i-hydration, kunye nokususwa kwako nakuphi na ukudumba kunye nenkwethu. Ioyile yeAlmond iyanceda ngaloo nto. Ikwakhuthaza ukukhula kwakhona kweenwele kwaye inciphise ukunciphisa iinwele. Ioyile yeAlmond ine-magnesium, calcium kunye ne-zinc. Ukuncipha kwemagniziyam kunye necalcium kunokukhokelela ekukhuleni okungaphantsi kweenwele kwaye ekugqibeleni, ilahleko yeenwele. Ukusilela kwe-Zinc kungakhokelela kwi-alopecia ekhokelela ekunciphiseni kweenwele. Njengoko ioyile yeamangile inezi minerali, ukusetyenziswa rhoqo kuyanceda thintela ukulahleka kweenwele .
Unyango: Hlanganisa i-almond, i-castor kunye neoli yeoli kwixabiso elilinganayo. Massage oku kwizinwele ezimanzi kancinci. Phinda oku kabini ngeveki kangangeenyanga ezimbalwa ukususa iziphelo. Massage ulusu lwakho neenwele ngeoyile yeamangile. Dipha itawuli emanzini ashushu kwaye ucofe amanzi angaphezu kwetawuli ngaphambi kokuba uyisonge ngokukhuselekileyo ujikeleze intloko. Gcina oku kangangesiqingatha seyure okanye njalo ngaphambi kokuba uyihlambe ngeshampu efanelekileyo.
Ngonwele olucekeceke nolukhazimlayo
Ioyile yeAlmond iyanceda ukunika i-hydration efunekayo kakhulu kwizinwele zakho ezibanceda bakhangeleke bekhazimla, kwaye bazive bathambile. Ii-acid ezibaluleke kakhulu kwioyile yealmond ziyanceda kuphela amafutha entlonzeni kodwa neenwele ziyazimela, yiyo loo nto zikhokelela iinwele ezisempilweni .
Unyango: Mash enye i-avocado, kwaye wongeze ioyile yealmondi kwimash. Hlanganisa ngokufanelekileyo kwaye usebenzise le ntloko entlokweni yakho. Gcina oku kangangemizuzu engama-45 ngaphambi kokuba uyihlambe ngeshampu.
Kwiinwele ezisempilweni kunye nezinamandla
Ioyile yeAlmond ine-vitamin E kuyo etyebileyo kwii-antioxidants. I-Antioxidants zithomalalisa iingxaki zesimahla ezichaphazela impilo yeenwele. Kuyanceda ekwenziweni umonakalo ezinweleni kubangelwa zizinto ezahlukeneyo ezinjengongcoliseko, iikhemikhali, ubushushu, njl.
Unyango: Thatha i-henna yemifuno kwaye uyicwilise emanzini ngobusuku bonke. Hlanganisa iipunipoon ezi-3 zeoyile yeamangile kunye neqanda elinye kule kusasa. Yongeza i-drop okanye ezimbini ze-oyile ebalulekileyo ye-lavender. Gcina umxube kangangemizuzu eli-10-15 ngaphambi kokuyifaka kwizinwele zakho. Yigcine iyure ngaphambi kokuba uyihlambe.
Iindlela ezahlukeneyo zokufaka isicelo
Ioyile yeAlmond inokusetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo eziluncedo kwi ukufezekisa iinwele eziphilileyo, ezintle . Enye indlela kukuyisebenzisa emva kokuba uhlanjiwe njengesixhobo sokupholisa ikhefu. Konke okudingayo kukufaka amanqatha eoyile yealmondi kwizinwele zakho xa sele yomile. Inika ukukhanya kweenwele zakho kwaye yenze umaleko okhusela iinwele kwizinto ezinobungozi zangaphandle ezinje ngongcoliseko, uthuli, njl.
Ukulungisa oku ngokukhawuleza, okokuqala, kuya kufuneka uzikame iinwele zakho ukuze uziphazamise. Qinisekisa ukuba iinwele zomile kwaye azimanzi xa uzikama. Qalisa ngasekupheleni kwaye ngokuthe chu unyukele phezulu ukuqinisekisa ukuba akukho xinzelelo lungafunekiyo kwizinwele ezikhokelela ekuweni kweenwele. Nje ukuba iinwele ziphazanyiswe, thatha ngaphantsi kwesiqingatha setispuni seoyile yealmondi kwizandla zakho kwaye uthambise izandla zakho kunye. Sebenzisa iminwe yakho ngeenwele zakho uqinisekise ukuba ioyile iyonke. Awudingi oli eninzi kule nto. Idambisa iinwele ezibalekayo kwaye iinwele ezinqabileyo naye. Qinisekisa ukuba awuchukumisi iingcambu zakho zeenwele xa ufaka isicelo ngenye indlela iinwele ziqala ukujonga ioyile. Unokwenza oku yonke imihla ukuba uyafuna.
Enye indlela yokucacisa ngakumbi kwaye yenziwa ngaphambi kokuba ufake ishampu kwizinwele zakho. Unyango olunzulu lokunyanga iinwele. Kule nto, ufuna iinwele zimanzi, njengoko ubumanzi binceda iinwele ukuba zifunxe ioyile yeamangile ngcono. Sebenzisa amanzi afudumeleyo okuhlamba, njengoko amanzi ashushu ethambisa iibhondi kwizinwele zakho enceda ukuyiphazamisa. Nje ukuba uhlambe iinwele zakho ngamanzi ashushu, sebenzisa ikama enamazinyo abanzi ngokuthe chu nangokugqibeleleyo ukuphazamisa iinwele . Dibanisa emva kokumisa iinwele kancinci usebenzisa itawuli.
Kuya kufuneka uyitshise kancinci ioyile- kufanele ukuba ifudumale ngaphandle kwebala kodwa ingatshisi. Ke, microwave ioyile kwimizuzwana eli-10. Oku kuvula ukusikwa kwangaphandle kweenwele, kusenza kube lula ukuba ukufuma kungene ezinweleni. Emva kokuphazamisa iinwele, thatha ioyile efudumeleyo yealmond kwiminwe yakho kwaye uyihlikihle entlonzeni yakho. Qala ukusuka kwizinwele zeenwele kwaye uye kwisithsaba kuqala.
Sebenzisa intshukumo ejikelezayo yeminwe, ukufaka uxinzelelo olwaneleyo ngelixa uphulula ioyile. Emva koko wenze okufanayo ukusuka kwinape ukuya kwisithsaba. Qinisekisa ukuba yonke inwele iyagqunywa. Inceda ekuvuseleleni ukukhula kweenwele ezintsha, ukulungisa iingcambu zeenwele, kunye nokukhusela iinwele
Emva kokuba yonke inwebu igqunyiwe, sebenzisa ikama enamazinyo abanzi ukunceda ukusasaza ioyile kuzo zonke iinwele zakho, imicu ibandakanyiwe. Ukuba usilela kufutshane ne iingcebiso ngeenwele , thabatha amathontsi ambalwa eoyile ye-almond ekufuneka isetyenziswe kwiingcebiso. Thatha itawuli efudumeleyo uyisongele entloko kangangeyure okanye njalo. Nje ukuba ugqibile, yihlambe ngeshampu yokucoceka. Yenza olu nyango kanye ngeveki.
Ioyile yeAlmond yeentlobo ezahlukeneyo zeenwele
Ukuba unamafutha, iinwele ezinamafutha, kuya kufuneka usebenzise unyango lweoyile eshushu. Hlanganisa ioyile yealmond ngeoyile yekhokhonathi. Fudumeza oku kwi-microwave ejikeleze imizuzwana eli-10 kwaye uyisebenzise kwizinwele zakho nasentloko. Musa ukulinda ixesha elide ngaphambi kokuhlamba iinwele zakho nangona kunjalo. Linda nje imizuzu eli-10, emva koko uhlambe iinwele zakho. Hlanganisa iipunipoli ezimbini ukuya kwezintathu zeapile cider iviniga kwimug yamanzi kwaye usebenzise oku hlamba iinwele zakho . Emva koko sebenzisa ishampu efanelekileyo ukucoca ioyile egqithisileyo. Olu nyango lonyango lweenwele zakho kwaye luzihambisa emanzini. Ngokuyihlamba kwangoko, uqinisekisa ukuba ioyile egqithileyo ayiqokeleli kwaye kugcinwa kuphela isixa esifunekayo.
Ukuba unenwele ezomileyo, ezinqabileyo, kuya kufuneka unike iinwele zakho ukufuma kunye neprotein yokunyusa. Ioyile yeAlmond isebenza njengesixhobo sokupholisa kunye neenwele zendalo ezinqabileyo, ngelixa kwelinye icala, iqanda linokulungisa umonakalo weenwele ngomxholo weprotini ephezulu. Yaphula iqanda elinye libe sisiqingatha sendebe yeoyile yealmond. Hlanganisa kunye ukuze wenze unobumba obushelelezi. Dibanisa iinwele zakho kwaye uzicwangcise. Faka uncamathiso entlonzeni kunye neenwele - ukusuka kwiingcambu ukuya kwiingcebiso, icandelo ngokwecandelo. Bopha itawuli apha, okanye usebenzise ikepusi yokuhlamba ukugcina iinwele kunye nokuncamathisela kunye ulinde imizuzu engama-45. Emva koko hlamba iinwele zakho ngeshampu efanelekileyo engenasulphate. Sebenzisa i-conditioner elungileyo nayo, emva kwe-shampoo. Nje ukuba uvale iinwele zakho, yithabathe amathontsi eoyile ye-almond kwaye uyisebenzise kwizinwele zakho njengekhefu lokupholisa.
Ukudityaniswa kweenwele yenye yezinto ezinamafutha - ezinamafutha kwezinye iinxalenye zesikhumba, kwaye zomile kwezinye. Okanye ioyile ezingcanjini kwaye yomile ukuya esiphelweni. Kwinwele enjalo, kuya kufuneka usebenzise unyango lweoyile olushushu entlonzeni. Faka ioyile efudumeleyo entlonzeni kwaye uyihlambe kwangoko. Sebenzisa iviniga yeapile cider iviniga, njengaleyo isetyenziswe apha ngasentla ukulahla ioyile egqithisileyo entlonzeni. Ngaphambi kokuba usebenzise ishampu, yoma ngetawuli kwaye uthambise ioyile efudumeleyo kwimicu yeenwele eziphepha entlonzeni kunye neengcambu zeenwele. Gcina le oli kangangesiqingatha seyure okanye njalo, emva koko uhlambe iinwele zakho ngeshampu efanelekileyo.
Iimaski zeenwele zisebenzisa ioyile yeAlmond
Kukho iimaski ezimbalwa zeenwele Sebenzisa ioyile yealmond . Nazi ezinye eziza kunceda iinwele zakho zifumane ukukhanya okunempilo kunye nokuthamba okuthambileyo. Hlanganisa ndawonye iipunipoli ezintathu zeoyile yealmond kunye neetafile ezintathu zeoyile yecastor. Yongeza ezinye iipalali zeentyatyambo ze-hibiscus kulo mxube. Hlikihla oku kwi-scalp yakho kunye neenwele kwimizuzu eyi-10. Shiya iyure emva koko, emva koko uyihlambe ngeshampu efanelekileyo.
Enye imaski isebenzisa ioyile yeargan, iqanda, ioyile yeamangile kunye nebhotolo ye shea. Thatha iqanda elinye leqanda, icephe elinye leoyile yealmondi kunye nethispuni enye yebhotolo yeShea. Kule mxube, yongeza isiqingatha kwisipuni setispuni seoyile yeargan. Nciphisa iinwele zakho ngamanzi afudumeleyo, kwaye uziphazamise. Faka umxube kwizinwele. Yisongele ngetawuli kwaye ushiye imizuzu engama-30 ukuya kwengama-40. Emva koko usebenzisa ishampu engenasulphate-free, yisuse yonke. Yenza olu nyango kanye ngeveki.
Thatha icephe elinye leoyile yealmond uze uyongeze kwikota yekomityi yeyogathi kunye neepunipoyi ezimbini zobusi obuhlaza. Hlanganisa oku kunye nokwenza unobumba. Ngebrashi yokufaka isicelo, yisebenzise kwizinwele zakho, kwicandelo ngecandelo njengemaski eshinyeneyo. Shiya imizuzu engama-30 ukuya kwengama-40 ngaphambi kokuyihlamba yonke usebenzisa ishampu efanelekileyo. Itawuli-yoma iinwele zakho emva koko uzishiye zome ngokwendalo. Yenza olu nyango kanye ngeveki.
Unokufunda malunga Izibonelelo zezempilo zeeamangile zokhathalelo lweenwele .
Izigaba Ekhaya Imikhwa Unyango Lwasekhaya
Olona nyango lwasekhaya lokumisa ukuwa kweenwele
I-4 kaJulayi iikowuteshini
Iifilimu zothando ezilungileyo kakhulu
uninzi lweemovie ezothusayo ezingaphantsi
Uluhlu lwee-meghan markle